I-Lava Lookout - Kāne - I-Airbnb
I-Lava Lookout - Kāne
426 okushiwo abanye
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Lauren
I-Lookout odakeni oludala lugeleza epharadesi elinezinsuku ezinelanga kanye nobusuku obucwebile obunezinkanyezi. Jabulela i-Milky Way kanye nokunethezeka endaweni ephuma ngaphandle kwegridi enendawo yokudonsa amanzi, ilanga, nezithelo. Lapha emngceleni lapho udaka lubingelela ilanga kuba nephathi yamasonto onke njalo ngolweSithathu. I-Kehena Black Sand Beach 5.8 miles away. Igumbi le-Kāne lingesinye sezitudiyo ezine ezizimele ezihlanganisa ikhishi elihlanganyelwe futhi zisebenza kahle emaqenjini amakhulu; hlola okunye ukufakwa kuhlu kwethu (Paka'a, Nāmaka, Pele) ukuze ubone ukubuyekezwa okwengeziwe kanye nemininingwane.
Uzokwazi ukufinyelela ekamelweni le-studio elizimele ngokuphelele elinendawo ephezulu. Kunendawo okwabelwana ngayo esizeni enezinsiza zokupheka (isitofu, ihhavini, ifriji, itafula elikhulu lemibuthano).
Lena indawo enhle yokuhlola okulandelayo ngaphandle kobunzima obuningi:
1. I-Volcanoes National Park - Hlola ne-USGS ukuze uthole izibuyekezo ngaphambi kophenyo.
3. Ukudlala nge-snorkeling
4. EkaMalume uRobert
**LELI CISHE INGENYE YEZINDLO EZIHLALA KAKHULU EZISEKHONA, IZILUNGU ZENZEKA LAPHA. ISEBENZA KANJANI NJE **
Umbhede omkhulu ongu-1, 1 usofa, imibhede yenetha engu-1
4.86 out of 5 stars from 426 reviews
4.86 · 426 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-426
Lena indawo eyingqayizivele futhi iheha abantu abaningi abahlukene, kanye nezivakashi. Sicela nje ukuthi wenze futhi uphathe abanye ngendlela ongathanda ukuphathwa ngayo. Hlonipha indawo kanye nesiko okuyimpilo ye-lava. Sicela uqonde ukuthi nakuba ukugeleza okusebenzayo kungase kungenzeki ngaso sonke isikhathi, ukubukwa kwentaba-mlilo nolwandle kuhlala kwenzeka.
Thina noma umphathi wethu sikhona futhi esizeni futhi siyatholakala nganoma imiphi imibuzo, ukukhathazeka noma ukuxhumana nabantu. Sicela uthumele umlayezo nge-AirBNB uma unemibuzo noma okukukhathazayo!
Inombolo yepholisi: GE-185-062-8608-01